30 taona ny GIF voalohany, iza no nieritreritra | Famoronana an-tserasera
Ity andiany an'ny sary mihetsika izay averimberina ao anaty loop iray dia manana anarana GIF ary amin'ity taona 2017 ity dia manamarika 30 taona taorian'ny nisehoany, tamin'ny 1987, ho endrika tsotra ho an'ny fifandraisana izay nananan'ny fotoana ary izany koa lasa nalaza be tamin'ny internet io ary ny fifandraisana eo amin'ireo mpampiasa tambajotra sosialy mandraka androany.
Tamin'ny taona 1986 dia nanomboka namolavola ny GIF ary ilay orinasa izay nanomboka tamin'ny famoronana voalohany dia CompuServe, izay afaka nanolotra serivisy fahagola an-tserasera ary namela ny mpampiasa hiditra chat room, forum na mombamomba ny stock amin'ny alàlan'ny modem nananan'izy ireo.
Ny GIF dia nanjary lohahevitra niadian-kevitra tamin'ny fotoana voalohany niainany
Ity iray ity teknika famoretana Nampiasako tamin'ny taona 1985 ny indostrian'ny Unisys, izay no nilazan'ny CompuServe fa tsy mahalala na inona na inona momba izany izy ireo. Ary tsy nitranga izany raha tsy tamin'ny 1994, izay rehefa natambatra ireto orinasa roa ireto ary nanambara izany ny orinasa Unisys dia mamela ny fampiasana ny endrika manana fahazoan-dàlana ho takalon'ny vola kely amin'ny fananana ara-barotra.
Ilay olona nanomboka nanao ireo sary mihetsika na GIF, nataony ho fomba fampisehoana sary mihetsika io ary injeniera Steve Wilhite. Tamin'izany fomba izany, ny lehibeny Sandy Trevor dia te-hanampy azy hamaha ireo olana roa lehibe nananany tamin'izany fotoana izany.
wilhite nanao ny GIF mifototra amin'ny prototype compression izay tsy niteraka fatiantoka tamin'ny anarana hoe Lempel-Ziv-Welch (LZW), mitantana ny hanana tamin'ny May 1987 ny kinova vonona voalohany tanteraka, izay sarin'ny fiaramanidina.
Talohan'ny nanaovan'i Sir Tim Berners-Lee ny famoronana ny World Wide Web Ary taorian'ny nanaovan'ny mpitety mozika mozika malaza azy io malaza, ny GIF dia naneho ny endriny roa taona lasa izay, araka ny tian'izy ireo hatao, ary mazava ho azy fa nahavita namoaka sary sy tabilao fampahalalana miaraka amina haben'ny rakitra izy ireo.
Na izany aza, nanomboka ny taona 1994 ka hatramin'ny 1995, dia io no fotoana nahitana olona manerantany nanomboka nanangana ny pejin-tranonkalany manokana amin'ny tranokala toa ny Geocities, izay miteraka ilay antsoina hoe fotoana manelingelina GIF, ka ny endrika misy ny asan'ny mamorona sary mihetsika tamin'ny endrika tadivavarana dia nanjary nilaina tokoa izy tamin'ireny taona voalohany ireny.
Nandritra ny taona 90 sy tamin'ny taonjato faharoa-polo dia nisy ny fitomboan'ny Geocities, niaraka tamin'ny antony nanehoana izany mahatonga ny GIF hifandray tsy tapaka amin'ny fahafinaretana.
Ny GIF dia afaka nampakatra ny iray tamin'ireo timer voalohany mpamorona pejy tranokalan'ny fotoana, mampiasa ny modem taloha 56k, amin'ny fe-potoana somary kely.
Na izany aza, ny fisehoan'ny fanaparitahana ny GIF, dia nifarana haingana toy ny niandohany ary tamin'ny taona voalohany tamin'ny taonjato XXI, rehefa niova ny endrik'ilay tranonkala, nanjavona ireo sarimiaina ireo, ankoatry ny zava-misy fa tamin'ny 1997 sy 1998 dia tapitra ny patanty GIF, nahatonga ireo mpamorona nomerika hafa toa an'i Olia Lialina, araraoty ny fotoana hanadihadiana ny fiasan'ity endrika ity ary noho ny asan'izy rehetra dia nahavita namonjy ilay GIF izy ireo tamin'ny famadihana azy io ho endrika am-pitandremana bebe kokoa, ho toy ny fomba fifandraisana an-tsary.
Na izany aza, raha jerena ny zava-nitranga rehetra dia nahavita nijanona tamin'ny Internet ny GIF. Na dia ho an'ny olona toa an'i Adam Leibsohn sy ireo orinasa toa ny CEO an'ny Giphy, maneho ny endrika fikomiana, satria manome ny fahafahan'ny mpampiasa hamoaka ireo sary ireo amin'ny toerana tsy tokony hisy azy ireo.
Na eo aza ny zava-drehetra sy ankehitriny, niverina ny GIF noho ireo sehatra marobe hita amin'ny internet. Tambajotra sosialy malaza toy ny Facebook sy Twitter ary haino aman-jery marobe toa ny Buzzfeed no nampihatra ny fampiasany.
Ary manararaotra an'izany GIF feno 30 taona, izahay manonona ny sasany amin'ireo malaza indrindra amin'ny hoe Michael Jackson mihinana popcorn sy Kermit ny sahona dia manoratra milina fanoratana mafy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » sary » 30 taona ny GIF voalohany, iza no nieritreritra